Home / Fitaovana an-dakozia / Solon-trondro mameno rano / WOWOW Faucet mameno vilany eo ambonin'ny fatana ao anaty nikela borosy
WOWOW Pot Filler Faucet Momba ny Stove ao anaty Nick Nick voapoaka
Ny fahaizana manadio ny fitaovany no mahatonga ny kaopy famenoan-dakozia ho an'ny kojakoja ampiasaina.
Vita vita amin'ny vy vy, vita amin'ny plastika famenoana vilany dia mahatohitra ny harafesina.
Ny mpanefy roa sosona roa sosona dia voakirana tsara, ka noho izany, tsy mora ny mikepoka na tsy matihanina.
Ny vokatra dia mora ampiasaina nefa tsy misy ezaka mafy hahazoana ananana.
2311100 torolàlana fametrahana
Ampio ny fikitihana mahazatra amin'ny lakozia aminao miaraka amin'ity rindrina tsara tarehy azo alaina any Wall-Mount Pot Filler 2311100 ity izay misy silhouette marefo.
Mety ho an'ny mpahandro an-dakozia be dia be ity mpameno vilany ity ho an'ny mpahandro anao ary vonona ny hameno tsara ny vilany fandrahoana azy tsy mila mamoaka azy ireo ao anaty fatana.
Fitaovana fampiasa amin'ny Hardware: Voasarona ao anatin'ny antoka tokana mandritra ny androm-piainan'ny Signature Hardware.
Ny fanakatonana avo roa heny dia ahafahan'ny mpanjifa mamono ny rano na eo amin'ny rindrina na ny spout, ka mifehy ny renirano mandritra ny fampiasana azy.
Ny vatam-paty voangona varahina dia mahatohitra ny harafesina ary safidy tsara kokoa hanoherana ny hafanana avo.
Rindrambazy vita amin'ny rindrina tokana Duo swing sendra mamela ny mpanefy taninketsaka hoho rehefa tsy zatra.
Famaritana: haavo: 9-1 / 2 ″ (ambany mankany an-tampon'ny faucet).
Haavon'ny spout: 2-3 / 4 ″ (afovoan'ny faladian'ny rindrina mankany amin'ny outlet spout).
Ny hafainganam-pandeha: 1.8 galons isan-minitra Faucet.
SKU: 2311100 Sokajy: Fitaovana an-dakozia, Solon-trondro mameno rano Tags: Nickel nopotehina, Mpanefy vilany, Wall Mounted
Pot Filler Faucet Folde Double Double Brush Nickel
Faucet / Classical / 2 kitapo varotra varotra
H l ***2020-06-14
Nahita olona sasany tany aho hahazoany vola be. Vidiny lafo izany, napetrako tamin'ny matihanina saingy nanaiky ny plumber fa vidiny faran'izay tsara sy kalitao tsara izany.
Novidinay tamina koveta ireo, satria manana fantsona misaraka amin'ny rindrina izahay fa tsy elanelana mahazatra amin'ny fampifangaroana.
Namboarina tsara ny zava-drehetra. Miasa mahagaga. Fanamboarana mavesatra. Volavola matanjaka sy tsara. Enga anie izy ireo haharitra mandrakizay!
Ny fijerena madio ary ny rafitra valizy roa dia tsara mba hisorohana ny fitetezana aorian'ny fanidiana azy. Ny olana amin'ity mpanefy vilany ity dia ny sandry dia tsy toradroa amin'ireo lahatsoratra ka toa somary mihena izy. UPDATE: Hitan'ny orinasa ny famerenako ary nahatratra izy ary nilaza fa nahazo vokatra tsy nety aho ary nandefa iray vaovao tsy misy fanontaniana apetraka amiko. Marina ny azy ireo, tsara ilay vaovao. Serivisy ho an'ny mpanjifa mahafinaritra
E *** h2020-06-28
Mahatalanjona fa tsy afaka miresaka ampy momba ity mpameno vilany ity aho. Izay rehetra mitsidika ny tranoko dia tia azy. Tsara ny serivisy ho an'ny mpanjifa ka tsy azoko angatahina ho an'ny mpiasan'ny serivisy tsara kokoa.
Tiavo ny volavola. Mahatsiaro ho matanjaka. Hividy iray amin'ny Delta ao an-trano Depot toy izao aho nefa lafo 400 $, ka nanapa-kevitra momba izany aho taorian'ny namakiako ny hevitra. Faly aho fa nahazo an'io, fa handefa sary ihany avy eo aorian'ny fametrahana ny WOWOW. Tena endrika maoderina sy fitiavana ny fahatsapany.
P *** f2020-07-11
Tena afa-po amin'ity mpameno vilany ity. Nametraka azy ny fantsom-bokatro ary mandeha tsara izy io. Tiako ny fijeriny ary tena mitombina ny vidiny. Ny mpivarotra dia tena nandray sy namaly ny fanontaniako momba ny vokatra.
A *** f2020-07-15
Tiako ity mpameno vilany ity. Tsy azoko an-tsaina mihitsy hoe mety ho ahoana ny hanana azy io. Mikoriana moramora ny rano ary tsy hikoropaka mihitsy. Eo anilan'ny fatana misy ahy ihany koa ny vilany kafe misy ahy ary ny tànana dia mahatratra tsara hamenoana ilay fitahirizana.
Tsy maintsy nividy tsofa loaka ho an'ny countertop-ko aho ary nanao zavatra hafa teo ambanin'ny fanovana counter mba hahazoana azy io. Raha tonga lafatra izao! Ireo tahony dia tsy apetraka amin'ny toerany. Ny olona iray dia tsy maintsy mieritreritra ny toerana misy / mivoaka an'ireo tahony roa mba hahazoana azy tsara na amin'ny na amin'ny eny ivelany. Ankoatra izany dia hatsaran-tarehy ho an'ny vola.
Tsy lafo io mpameno vilany io, ary toa tsara sy mandeha tsara. Vita mainty matte io. Mivelatra hatrany amin'ny burner aloha izy io. Mora mihetsika izy ary mora ny mametraka azy. Izy io dia manana renirano mikoriana tsara.
*** D E2020-07-25
Vidiny lafo, mandeha araka ny nampoizina. Finish toa tsara, mendrika kalitao. Azo inoana fa mitarika maimaim-poana. Manantena aho fa ho tonga amin'ny famaranana roa toy ny ankamaroan'ny rehetra fa ny zavatra rehetra atolotro anao rehetra.
Ny dia fanampiny tsara ao an-dakozianay. Tian'ilay mpandraharaha manao ny asa izany ka hametraka ny tenany izy. Tsara daholo! Nihevitra ny rehetra fa milay be ilay izy.
Tena talanjona tamin'ny kalitao sy ny fametrahana mora. Tsara ho an'ny lakoziko ara-barotra. Azo ampiasaina na aiza na aiza. Manoro hevitra tokoa.
E *** O2020-08-03
Nanamboatra ny lakozianay fotsiny izahay ary nanampy ity mpameno vilany mahafinaritra ity. Namboarina tsara ary lasa mora!
Tiavo ity faucet ity. Miasa tsara! Mety tsara ny paozin-tsolika mandeha sy matanjaka fa tsy mila manakaiky fatana mafana vao ho velona.
Nampiasa io faucet io tao amin'ny trano fidiovanay izahay. Mora ny fametrahana ary toa tsara izany!
Tena tsara tarehy ity faucet ity ary tsy maharesy ny vidiny ianao! Natahotra aho fa ho malemy io nefa vita tsara.
Ny andro taorian'ny nahazoako ny vokatra dia natomboko ny fametrahana ny faucet famenoana vilany. Ny habetsan'ny kasety PTFE dia ampy. Taorian'ny fotoana tsy nahombiazako tamin'ny fametrahana voalohany satria be loatra ny kasety, dia mbola ampy ho an'ny fametrahana faharoa ahy ny kasety fantsona PTFE sisa. Rehefa vita ny fametrahana dia nanao fitsapana maro aho, ary tsy nisy fivoahan'ny rano!
Haingana ny fandefasana azy, ary nahazo ny vokatra aho tamin'ny andro fahatelo taorian'ny nividianako. Ny lakozako vao nohavaozina dia mila mametraka faucet maika. Lakozia tsy misy faucet dia tsy afaka miasa tsara. Mila apetrako eo amin'ny rindrina ilay fantsom-pamenoana vilany. Ny kasety tombo-kase PTFE avo lenta dia tena zava-dehibe amin'ny asa fametrahana. Misaotra ny kasety tombo-kase PTFE avo lenta nomen'ny mpivarotra. Tena lehibe ny vola ary ampy ahy ny mampiasa azy in-2-3.
L l ***2020-09-02
Ity fantsom-pameno vilany ity dia mahomby kokoa amin'ny asa any an-dakozako. Taloha dia mila mitondra vilany mavesatra foana aho hahazoana rano ao ambanin'ny faucet na handatsaka rano ao anaty vilany miaraka amin'ny kaontenera hafa. Zavatra tena manahirana sy mankaleo ity. Rehefa nanamboatra ny lakozianay vaovao izahay dia nandresy lahatra ny vadiko hametraka fantsona famenoana vilany. Ny fauxet Piper poter dia iray amin'ireo andrana nataonay ary tena afa-po tamin'ity faucet ity izahay. Vita tamin'ny varahina indrindra izy io, ary ny atiny dia matotra mainty misy sosona elektrôlika, izay toa kilasika sy kanto tokoa. Aorian'ny fametrahana azy ao an-dakozia dia lasa kintan'ny lakozianay izy io. Hatramin'ny nandraisanay ny mpitrandraka plastika matihanina hametrahana dia nandeha soa aman-tsara ny zava-drehetra, ary ny fantsom-pamokarana vovoka dia miasa tsara foana hatreto, tiako izany!
*** N N2020-09-08
Ny boaty nisy ny vokatra dia namela azy halefa tsy misy marika vy borosina vy. Ny ampahany napetraka ao amin'ny rindrina dia mora loatra mba hitsangana raha nijery ireo fanamboarana vaovao izahay. Cant miresaka amin'ny fametrahana amin'ny rindrina efa misy. Ny vokatra dia tonga niaraka tamin'ny allen wrench hametrahana ilay mpifanaraka aminy. Tena tsy mampino izany woudl raha toa ka nampiditra kasety teflon kely koa izy ireo, saingy efa misy izany ny boaty fitaovana miasa miaraka amin'ny fantson-drano. Mora ny manaraka ny boky fampianarana. Zahao ny Internet mba hahitanao hoe hatraiza ny rindrina tokony hametahanao ny faucet araka izay itiavanao azy mba hahafahana mameno ireo vilany fa miaraka amin'izay dia aza mikapoka ny micro-micro anao eo ambonin'ny faritra misy anao.
Vao avy nametraka ilay mpameno vilany izahay, tsy nino ny rehetra ary nilaza mialoha fa tsy hampiasa azy io mihitsy aho. Diso hevitra izy ireo! Rehefa mihalehibe ianao dia manampy anao tsy hitondra vilany mavesatra misy rano any amin'ny fatana ity mpameno vilany ity. Ny ankamaroan'ny chef na izay mahandro isan'andro dia ho tia an'io ary hahita fa mahasoa. Tiako ny famolavolana sy ny mikasika. Ny hany atahorako dia rehefa eo am-patana ny fatana ary eo an-tampon'ny hafanana ilay mpameno vilany, mety hiteraka fahasimbana ve izany? Hatramin'izao dia manana mpandoro 6 aho dia manandrana tsy mampiasa ilay burner izay eo an-tampon'ny famenoana vilany. Kevitra.
Tsara tarehy, mpanefy vilany tena tsara. Tsy nahita kalitao avo lenta amin'ny vidiny. Fametrahana tena mahitsy. Tsy hanao raha tsy misy indray. Ny entana dia nofonosina tsara tokoa, ary tsy misy malaina ao amin'ilay singa. Milamina sy malama. Tonga lafatra ny farany.
Ity mpameno vilany ity dia vita tsara tarehy ary manampy fanampiny mahavariana ny lakozia vaovao. Ny plumber ahy dia nametraka mora foana ny mpameno vilany. Toa maharitra izy io ary ny fanamorana ny fampiasana dia hanome fifaliana mandritra ny taona maro ho an'ny fianakaviako.
Fametrahana mora, toa tsara. Mahatsiaro ho matanjaka ary malefaka ny fanaraha-maso. Herinandro fotsiny no nahitana azy. Tiako hatreto.
*** N y2020-10-07
Vao nametraka azy io., Toa tsara